Daty jamba: ahoana ny fomba fitondran-tena? - tombony sy fatiantoka
Ny daty jamba dia mazava ho azy fa tsy ny fanantenana farany ho an'ireo izay diso fanantenana sy mamoy fo amin'ny fiarahana. Voalohany indrindra, amin'ny fivoriana toy izany, dia afaka mihaona amin'ny tena fiainana ilay vehivavy / lehilahy nofinofisinao.
Nandritra ny taona maro dia nandinika ny fihetsiky ny mpivady sy ny toetoetran'ny fifandraisan'izy ireo ny psikology. Mety hahagaga ny olona iray ny vokatry ny asany. Rehefa natao ny fanadihadiana momba ny fomba fifankahalalan'izy ireo dia maro tamin'izy ireo no namaly fa nihaona tamin'ny namany izy ireo.
Tokony holazaiko izany daty jamba tsy afaka mitarika any amin'ny farany lozika, izany hoe ny fanambadiana sambatra. Ity dia mety ho fitsapana marina izay hitombo tsikelikely ary hitombo hatrany amin'ny tena loza.
Ahoana no hisorohana izany tsy hitrangan'izany? Andao hiezaka hahatakatra an'ity olana ity.
Ilaina ny mifehy ny toe-javatra
Tsy tokony hanaraka hatrany ny fitarihan'ny olon-kafa ianao ary hanohitra ny fanirianao. Raha tsapanao fa mila mandà ianao dia ataovy izany. Ny lehilahy iray dia tsy voatery hihaona amin'ny zanakavavin'ny sakaiza sakaizan-dreniny fotsiny mba tsy hanafintohina an'ity farany.
Tokony handray anjara mavitrika amin'ny fandaharam-potoana fivoriana ianao.
Aza avela olon-kafa hametraka toerana sy fotoana hanaovana daty fa tsy ianao, ary tsy misy ny fanekenao. Ny singa rehetra amin'ny tsy fantatra dia tokony hesorina amin'ny daty, afa-tsy ilay vehivavy mistery.
Voafidy toerana hanaovana fivoriana iray ahafahan'izy roa mahazo aina.
Misafidiana toerana mety hanaovana fivoriana
Sinema, kaonseritra rock, izay mitabataba be izy, mety tsy ny toerana mahomby indrindra amin'ny fivoriana voalohany. Ny tsara indrindra dia ny mipetraka ao amin'ny trano fisakafoanana na cafe, izay ahafahanao manaikitra sy hihaino mozika mahafinaritra, izany dia ho tantaram-pitiavana kokoa.
Amin'ny daty voalohany, matetika izy ireo dia te hifankalala fotsiny, mifaly ary mamorona hevitra momba ny tsirairay.
Aza esorina ny daty
Na inona na inona mitranga amin'ny fivoriana voalohany, dia aza sintomina lava loatra, farafahakeliny adiny roa. Matetika ny daty jamba dia mitranga ao amin'ny trano fisakafoanana, satria ny sakafo hariva no fiandohana, famaranana ary famaranana ny fivoriana, raha ny tokony ho izy, dia hetsika voajanahary.
Rehefa mandefa ny volavolan-dalàna ilay mpandroso sakafo dia famantarana izany fa mila tapitra ny daty. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra amin'ny fivoriana voalohany dia azonao atao ny manao ny daty manaraka.
Tsy tokony hisy olona fahatelo amin'ny daty jamba
Raha eo imason'ny olona nampahafantatra ny tanora ny daty dia azo antoka fa hahatsapa ho menatra sy menatra noho ny toe-javatra izy ireo.
Raha miezaka mafy ny namana dia miharatsy hatrany ny raharaha. Tsara kokoa ny mifampidinika aminy mialoha ka aorian'ny folo minitra dia avelany irery ireo mpivady.
Miresaka momba ilay sakaiza nampahafantatra anao
Lohahevitra lehibe ho an'ny resaka ny olom-pantatra, izany dia hanampy anao hifampijery akaiky tsy misy fanelingelenana diso tafahoatra.
Tsy tokony hiresaka momba ny fifosana momba ny olom-pantatra ianao, satria ny resaka toy izany dia azo antoka, toy ny boomerang, hiverina ary, azo inoana, amin'ny endrika maloto. Ary tsy ny rehetra no te hihaino ny fifosana.
Tokony ho tsara fanahy amin'ny daty iray ianao.
Maro ny daty jamba no heverina fa asan'ny olona very fanantenana. Tokony ho tonga amin'ny interlocutor amin'ny toe-po tsara ianao, hikarakara azy amin'ny fahalianana, mba hahafahanao mandany hariva mahafinaritra sy mahasoa.
Ahoana no hanorohana tovovavy voalohany?
Toro-hevitra momba ny fomba ahalalana raha tianao ny lehilahy na tsia
Prev Afaka misotro labiera ve aho amin'ny sauna?
Manaraka Akoho ao anaty lafaoro misy ovy sy holatra
63 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,968.